Robin V.Persie oo si heersara ah loogu soo dhoweeyay magaalada Manchester(Sawiro)
Updated About:282 days ago 0
Kabtankii hore ee kooxda Arsenal RVP ayaa si aad ah loogu soo dhoweeyay magaalada manchester,kadib markii uu heshiis 4sano ah qalinka ugu duugan shayaadiinta cascas,V.persie ayaa xalay soo gaaray isbitaalka “Bridgewater Hospital “si uu umaro tijaabada caafimaad kahor intuusan sabtida beri ah furmin horyaalka ingiriiska.
29-jirkan ayaa arsenal kaga soo dhaqaaqay £24million,waxaana dagaal xoogan ugu jiray naadiyada Man city,Juventus iyo manchester United oo ugu danbeynti ku guuleeysatay heshiiska xidigan heerka caalami.
Sir Alex Ferguson oo beryahanbo aad ugu mashquulsanaa suuqa kala iibsiga iyo arinta xidigan Van Goal ayaa sheegay in naadiga uu tababaraha uyahay ee Manchester United ay noqon doondo naadiga ugu awooda badan qaarada yurub maadaama ay iska wada garab ciyaari doonaan Wayne Rooneey & RVP,sidoo kale waxa uu sheegay inaan laga xigin horyaalka Ingiriiska iyo koobka Champion League.
Ferguson ayaa sheegay in weerarka ay kawada qeyb qaadan doonaan Rooneey,V.persie,Danny Wellbeck,Hernandez, waxa uuna la barabardhigay sanadii 1999 xiligaasoo ay weerarka shayaadiinta cascas kawada qeyb qaadanayeen Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham iyo Ole Gunnar Solskjaer, afartan ciyaaryahan ayaa 1999 waxay ahaayeen weeraryahanadii ugu qatarsanaa caalamka.
Somalia: Qabyaaladda iyo Siyaasadda Soomaaliya Dhageyso